shankalay13: တစ်နေ့ တာ လုပ်သင့်တာလေး
ပါးစပ်အနံ့ပျောက်နည်း
ငရဲမှ ဖုန်းခေါ်သံ ....
တစ်နေ့ တာ လုပ်သင့်တာလေး
သူ့ မှာလဲ နှလုံးသားနဲ့ ပါ....
2. မနက်စာကို ဘုရင်လိုစား၊ နေ့လည်စာကိုတော့ မင်းသားလေးလိုစား၊ ညစာကိုတော့ သူတောင်းစားလို စားပါတဲ့။ (အားလုံး နားလည်ကြမှာပါ)
3. သစ်ပင်ပေါ်က ရတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို များများစားပေးပါ၊
5. တရားထိုင်ခြင်း၊ ယောဂကျင့်ခြင်း၊ ဘုရားရှိခိုးခြင်း တို့ကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးပါ။
6. ကစားခုန်စားလည်း များများပြုလုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်တယ်။
8. တစ်ရက်မှာ 10 မိနစ်လောက် ဆိတ်ဆိတ်နေကြည့်ဖို့ကိုလည်း ကြိုးစားကြည့်သင့်တယ်။
9. တစ်ရက်မှာ7နာရီလောက်တော့ အနည်းဆုံး အိပ်သင့်ပါတယ်။ (ကျွန်တော်ကတော့ 8 နာရီကျော်ကျော်လောက်ပဲ အိပ်တာ):P
10. တစ်ရက်မှာ 10 မိနစ်ကနေ နာရီဝက်လောက်ထိ လမ်းလျှောက်သင့်ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်နေစဉ်မှာလည်း မျက်နှာလေးကို ခပ်ပြုံးပြုံးလေး နေပေးရမယ်တဲ့။ (အရူးလို့တော့ မထင်လောက်ပါဘူးနော်..: P)
11. ကိုယ့်ဘ၀ကို သူများတွေနဲ့ မယှဉ်ပါနဲ့။ သူတို့ ဘယ်လမ်းကြောင်းကို လျှောက်လှမ်းနေတယ်ဆိုတာ သင် မသိနိုင်ဘူးလေ။
12. ကိုယ်မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ အရာတွေပေါ်မှာ မကောင်းမြင်စိတ်တွေမထားပါနဲ့။ အဲ့ဒါတွေကြောင့်လည်း စိတ်ဆင်းရဲ မနေပါနဲ့။ လက်ရှိကိုယ့်မှာရှိနေတာလေးကို တန်ဖိုးထားပြီး ဒါတွေကိုပဲ ပိုကောင်းအောင် လုပ်လိုက်ပါ။
13. အလုပ်တွေကိုလည်း အလွန်အကျွံ မလုပ်ပါနဲ့.. အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိပဲလုပ်တာ ကောင်းပါတယ်။ (ဒါကြောင့်ကို.. ဘာမှမလုပ်ပဲ နေတာ..)
14. ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိပ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီး မခိုင်းစေပါနဲ့။ ဘယ်သူမှလဲ ဒါမျိုးမလုပ်ပါဘူး။ သက်တောင့် သက်သာလေးသာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
15. ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ စွမ်းအင်တွေကို အတင်းပြောခြင်းဖြင့် မကုန်ဆုံးပါစေနဲ့။
16. အိပ်နေစဉ်မှာထက် နိုးနေချိန်တွေမှာ အိပ်မက်ပိုမက်ပါ။
17. မနာလို ၀န်တိုဖြစ်နေတာဟာ အချိန်ဖြုန်ခြင်း တစ်မျိုးပါပဲ။ သင့်မှာ လုပ်ကိုင်စရာ လုပ်သင့်တဲ့ လုပ်တွေအားလုံးရှိနေပါတယ်။ အချိန်မဖြုန်းပါနဲ့။ (အလုပ်သိပ်မလုပ်နဲ့ လို့ လဲ ပြောတယ်။ အချိန်မဖြုန်းဖို့ လဲပြောတယ်နော်)။
18. အတိတ်က ပြသနာတွေကို မေ့လိုက်ပါ့တော့။ ကိုယ့်ရဲ့ လက်တွဲဖော်၊ ကြင်ဖော်တွေမှာ အတိတ်က အရိပ်ဟောင်းတွေ ရှိနေရင်လည်း ပြန်မဖော်ပါနဲ့တော့။ ဒါတွေက လက်ရှိဘ၀ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ဖျက်ဆီးလိမ့်မယ်။ (ရည်းစားအဟောင်းတွေ အကြောင်းသိပ် မစဉ်းစားနဲ့ပေါ့လေ။ )
19. ဘ၀ဟာ သိပ်တိုတောင်းပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို မုန်းဖို့ ဆိုတဲ့ အချိန်တောင် ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် တစ်ခြားလူတွေကို မမုန်းပါနဲ့။ (များများချစ်သင့်တယ်လေ)
21. ကိုယ့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေရဲ့သခင်ဟာ ကိုယ်မှလွဲလို့ နောက်တစ်ယောက် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
22. ဘ၀ဆိုတာ ကျောင်းတော်ကြီး တစ်ခုဖြစ်တယ်။ သင်က အဲဒီကျောင်းတော်ကြီးမှာ ပညာသင်ရမယ့် ကျောင်းသားလေးပေါ့။ ပြဿနာဆိုတာက သင်ရိုးညွှန်းတမ်း တစ်ခုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းမျှသာ ဖြစ်တယ်။ အက္ခရာ သင်္ချာတွေကို တွက်ချက်သလို
ဖြေရှင်းနိုင်သွားမှာပါ။ အဲ့ဒါတွေရဲ့ သင်ခန်းစာကတော့ သင့်ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးအတွက် အရေးပါနေမှာပေါ့။
23. များများပြုံးပါ၊ များများရယ်ပါ။
24. အငြင်းအခုံတွေတိုင်းမှာ သင်ချည်းပဲ အနိုင်ရနေမှာ မဟုတ်ဘူး။ သင် သဘောမတူတာတွေကို သဘောတူအောင် ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါလား။
25. သင့်မိသားစုနဲ့ မကြာခဏဖုန်းပြောပါ။ အဝေးရောက်နေတယ်ဆိုရင်ပေါ့။ တူတူနေတယ်ဆိုရင်တော့ နွေးထွေးတဲ့ ဆက်ဆံရေးလေးဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ပါ။
26. အများသူငှာအတွက် ကောင်းမှုတစ်ခု နေ့စဉ်ပြုကြည့်ပါ။
27. လူတိုင်းကို အရာအားလုံးအတွက် ခွင့်လွတ်တတ်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။ (သိပ်စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတယ် ကိုယ်တွေ့ပါပဲ)
28. အသက် 70 ကျော် ဘိုးဘိုး၊ ဘွားဘွားတွေ၊ အသက်6နှစ်အောက်ကလေးတွေနဲ့ အချိန်များများ ပိုဖြုန်းပါ။
29. တစ်နေ့မှာ လူသုံးယောက်လောက်ကို ကိုယ့်ကြောင့် ပြုံးရယ်သွားအောင် ကြိုးစားကြည့်ပါလား။
30. တစ်ခြားသူတွေ သင့်ကိုဘာပဲထင်ထင်။ ကောင်းတဲ့ အလုပ်ဆို များများသာလုပ်ပါ။
31. သင့်ရဲ့အလုပ်က သင်နေမကောင်းဖြစ်နေချိန်မှာ သင့်ကိုလာပြုစုမှာ မဟုတ်ဘူး။ သင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုဝင်တွေကသာ သင့်အနားမှာ ရှိနေကြလိမ့်မယ်။ သူတို့တွေနဲ့ များများ ထိတွေ့နေဖို့ လိုအပ်တယ်။
33. အသုံးမ၀င်တဲ့၊ နှစ်လိုဖွယ်မရှိတဲ့၊ ကြည်နူးဖွယ် မကောင်းတဲ့ အရာမှန်သမျှကို သင့်စိတ်ထဲက ထုတ်ပစ်လိုက်ပါ။
34. ကံ ကံ၏အကျိးကိုယုံပါ။ ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းတာဖြစ်မယ် ..မကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းတာဖြစ်မယ် .....ကုသိုလ်များများလုပ်ပါ ...စိတ်ထားကောင်းကောင်း မွေးမြုပေးပါ။
35. ကောင်းတာပဲ ဖြစ်နေဖြစ်နေ၊ ဆိုးတာပဲ ဖြစ်နေဖြစ်နေ မမြဲပါဘူး။ အမြဲပြောင်းလဲနေမှာပါပဲ။
36. ကိုယ်ဘာတွေပဲ ခံစားနေရ နေရ၊ ကိစ္စ မရှိပါဘူး။ ကဲ… လာ သွားစို့..လုပ်သင့်တာလုပ်..။
37. အကောင်းဆုံးတွေဆိုတာ ဖြစ်လာဦးမှာပါ။ကြိုးစားရမှာ မိမိ တာဝန်သာ ဖြစ်တယ်။
38. နံနက်တိုင်းမှာ အသက်ရှင် အန္တရာယ် ကင်းပြီး နိုးထလာတာတိုင်း လူဖြစ်လာတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ကောင်းကောင်းသိပါစေ....(ဆရာဝန်လုပ်ဖို. သူဠေးကြီးလုပ်ဖို့ အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ဖို့ လူဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး ကောင်းမူကုသိုလ်တွေလုပ်ဖို. လူဖြစ်လာတာပါ။)
39. ကိုယ့်ရဲ့အတွင်း စိတ်သန္တန်ဟာ အမြဲပျော်ရွှင်နေရမယ်။ ဒါကြောင့် ပျော်ပျော်သာနေပါ။ဒုက္ခတွေကို ပေါ့ပါးစွာဖြစ် ရင်ဆိုင်ပါ။
ရှမ်းကလေး (အီးမေးလ်မှစာအား ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါသည်၊ သီတင်းလဲကျွတ်ပြီဆိုတော့လဲ ချစ်သူများပျော်ရွင်နိုင်ပါစေဗျာ)
Posted by Shankalay or Sai Sai at 5:14 AM